Gaari Booyad Ah Oo Ciidamada AMISOM looga Gubay Duleedka Balcad.
Monday May 14, 2018 - 08:35:32 in Wararka by Super Admin
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ciidamada shisheeyaha AMISOM kasoo gaaray qarax xooggan oo lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka shabeelaha dhexe ee duleedka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho.
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ayaa sheegaya in qarax miino uu burburiyay gaari Booyad ah oo ay wateen ciidamada Burundi ee duullaanka ku jooga deegaanno iyo degmooyin gobolka katirsan gobolka Sh/dhexe.
Goob Jooge ku sugan Sh/dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in xalay Maqribkii qarax Miino uu deegaanka Gololeey ku haleelay gaari Booyad ah oo shidaal ugelbiyay dhanka magaalada Jowhar balse markii uu dib ugu laabanayay Muqdisho uu weerarku haleelay, dhammaan ciidamadii la socday gaariga booyadda ah ayaa dhimasho iyo dhaawac noqday.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo dheeraad ah ay gaareen goobta qaraxu ka dhacay waxayna isku gedaameen goobta oo uu yaal gaarigii qaraxa lagu burburiyay.
Qaraxan ayaa imaanaya Bil kadib markii Taliska AMISOM uu ciidamo dajiyay wadada xiriirisa Jowhar iyo Balcad si ay ubaajiyaan weerarada Al Shabaab balse waxaa muuqata in isku daygaas uu fashilmay waxaana wali sii socda weerarada mujaahidiinta ee ka dhanka ah ciidamda shisheeye.
Ciidamada Burundi ee xoogga ku jooga gobolka Sh/dhexe ayaa weeraro dhabagal ah iyo qaraxyo kala kulmaya xoogaga Al Shabaab ee ku sugan deegaanno iyo degmooyin katirsan Sh/dhexe, sanaddii lasoo dhaafay ee 2017 qaraxyo iyo weeraro lagu dhiig bixiyay ciidamada Shisheeye ayaa ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Jowhar.